Tightwad Terror talata - Sarimihetsika maimaim-poana ho an'ny 7-20-21 - iHorror
Home Sarimihetsika mahatsiravina Tightwad Terror talata - Sarimihetsika maimaim-poana amin'ny 7-20-21
by James Jay Edwards Jolay 20, 2021
by James Jay Edwards Jolay 20, 2021 1,320 hevitra
Hey Tightwads! Ahoana ity hafanana ity? Mialà sasatra amin'ny alàlan'ny fijanonana ao anatin'ireto sarimihetsika maimaim-poana avy amin'ny Tightwad Terror Talata sy iHorror ireto.
American Mary (2012), nahazoana lalana avy amin'ny Alameda Entertainment.
Mary Amerikanina dia momba ny mpianatra mpitsabo iray izay mianatra ho lasa mpandidy. Voafehin'ny trosa izy, ary tonga mpandidy plastika ambanin'ny tany izay hanao karazana fomba fiovana amin'ny marariny… raha mbola mety ny vidiny.
Ity horohoron-tany tamin'ny 2012 ity dia tandindon'ny horohoron-tany Cronenbergian. Afa-tsy hoe i Soska Sisters, Jen ary Sylvia no nitantana azy. Katharine Isabelle dia mitana ny laharana voalohany. Topazo maso Mary Amerikanina Eto ao amin'ny TubiTV.
The Innkeepers (2011), nahazoana lalana avy tamin'ny Magnet Releasing.
The Innkeepers dia momba ny mpiasa roa mandritra ny faran'ny herinandro faran'ny hotely taloha. Voalaza fa manenjika ny trano fandraisam-bahiny, ary samy nandray ny lazany ny mpiasa roa. Rehefa manadihady ilay mpilalao sarimihetsika taloha / mpanelanelana ankehitriny dia manapa-kevitra ny hanao snooping manokana an'ny psykolojika ny mpivady mpihaza matoatoa.
Ity fiarahan'ny Ti West 2011 ity dia sary mihetsika mahatsikaiky. Ny mpilalao dia ahitana an'i Sara Paxton sy Pat Healy ho mpiasa, ary i Kelly McGillis ho mpiraki-draharaha. Jereo tsara ny sary farany, angamba na indroa aza raha mila - misy zavatra mahatsiravina ao. Zahao hoe The Innkeepers Eto ao amin'ny Vudu.
Zombeavers (2014), nahazoana lalana avy tamin'ny Freestyle Releasing.
Zombeavers dia tena araka ny eritreritrao azy. Horonantsary tamin'ny 2014 ity momba ny andian-jaza mandeha amin'ny kabine lavitra any amin'ny farihy iray mandritra ny faran'ny herinandro eo amin'ny lahy sy ny vavy sy ny fimamoana. Mampalahelo fa ho azy ireo, ny rano dia tototry ny bevava zombie - zombeavers, azoazo?
Adaladala toa mampihomehy ihany ity hatsikana mampihoron-koditra ity fa raha mitady fahafinaretana ianao dia izao. Izy io koa dia ranomandry mikoriana tsara ho an'ireo mpankafy mampihorohoro izay marary hatramin'ny fahafatesan'ny zombies. Anisan'ny mpilalao ao anatin'izany ny mpanjakavavin'i Cortney Palm, Lexi Atkins, ary Rachel Melvin, ary whoa! i John Mayer ve izany? Zahao hoe Zombeavers Eto ao amin'ny Tubi TV.
Dark Skies (2013), nahazoana lalana avy amin'ny Dimension Films.
Lanitra maizina dia sarimihetsika mahatsiravina sci-fi 2013 momba ny fianakaviana suburban mahazatra izay mipetraka amin'ny tanàna manodidina mahazatra. Taorian'ny andianà tranga hafahafa dia manomboka mieritreritra ny fianakaviana fa mety ho lasibatry ny zava-dratsy izy ireo. Ary mba hisy zavatra mahatsiravina tonga avy any ankoatry ny kintana…
Hatramin'ny sarimihetsika fakana an-keriny vahiny, Lanitra maizina dia, iray amin'izany. Namboarina tsara, saingy tsy nisy zavatra vita teo aloha. Ny mpilalao dia ahitana an'i Keri Russell, Josh Hamilton, ary JK Simmons, noho izany dia ilaina izany. Sambory Lanitra maizina Eto, koa ao amin'ny TubiTV.
The Children (2008), nahazoana lalana avy amin'ny Ghosthouse Underground.
Ny ankizy dia ny tantaran'ny fianakaviana roa izay nankany amin'ny tany mitokana any an-trano mandritra ny fialantsasatra amin'ny ririnina. Rehefa tonga any dia marary daholo ny ankizy kely - avy eo mivadika famonoana olona ary manafika ny olon-dehibe.
Ity iray ity dia tsy maintsy-hojeren'ny mpankafy ny ankizy mpamono olona matetika tsy hitan'olona. Mampihoron-koditra ireo ankizy mpamono olona, ​​saingy ity sarimihetsika britanika 2008 ity koa dia manipy sary amin'ny herisetra marobe izay tena mendrika tokoa. Somary milalao ihany ihany koa ny fihetsem-po satria, ankizy ireo… ahoana no hanakananao azy ireo tsy hamono nefa tsy manararaotra ankizy? Jereo hoe ahoana no anaovan'ny olon-dehibe an'ilay sarimihetsika azy (na tsia) Eto, indray ao amin'ny TubiTV.